PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Siyathokoza ngomndeni wakwaChonco
Siyathokoza ngomndeni wakwaChonco
Isolezwe - 2017-10-12 - IMIBONO -
MHLELI: Egameni leqembu iNkatha Yenkululeko sidlulisa ukuthokoza kwethu njengamalunga eqembu esifundeni saseSisonke ngesenzo esihle esenziwe ngumengameli ukuthumela umyalezo wokuzwelana nomndeni wakwaChonco enkonzweni yokuphelezela uMnuz Dumile Chonco oyindodana kaDkt Zamindlela Chonco naye ongasekho.
Sidlulisa nokuthokoza kwethu njengeNkatha Yenkululeko emndenini wakwaChonco ukwamukela isithunywa ebesimele uMntwana waKwaPhindangene njengomlomo wakhe ukudlulisa amazwi okuzwelana nomndeni.
Kithina njengamalungu eqembu leNkatha ikakhulukazi endaweni yaKwaNokweja sithokoza kakhulu kumengameli nomndeni ngokulokhu njalo sihlonishwe umholi osezingeni lenkosi uButhelezi ngokubusiswa uMdali emlandweni ngalo mndeni wakoGambushe.
Kuyintokozo kithina njengeqembu ukuvuselelwa komoya wobunye olokhu ugqugquzeleke njalo ngalo mndeni ngokuba nobudlelwane obumiyo noMntwana waKwaPhindangene lapho isidingo sokubuyisana nokulungiswa komlando wokulwela izinguquko ezweni lethu laseNingizimu Afrika.
Uma inkosi yakwaButhelezi ihambela lomndeni ngezikhathi zonke kuvuka uhlevane emizimbeni yethu ngokubuka ububi bokuphendukezelwa kwamaqiniso ngoShenge neqhaza alibambile ekuguqulweni kwesimo sokuphathwa kwesizwe esinsundu ezweni lokhokho baso ngezeluleko zezinsizwa zalomndeni ikakhulukazi uyise womfowethu ebesimphelezela namanye amaqhawe angoyisemkhulu. Kungabe angikhulumeli ngokweqiniso iqembu futhi ngikhalele umphakathi wakithi ngobubi bemfundisoze evale kwabamnyama emphakathini esiwakhele lapho idimoni lokwesabisa nodlame olumnyama nomnyama lwasibekela indawo yakithi kangangoba umphakathi wesatshiswa nokuyohlonipha okokugcina uqobo lukadokotela uChonco.
Sithokoza kakhulu ngalo mndeni kuthi njalo uma kusondela uMntwana waKwaPhindangene umphakathi wakithi uthola lokhu okuthiwa umhabulo oyiwonawona nangalo iqembu elibusayo ngenxa yokubusiswa kwesifunda sethu ngalo mndeni wakoShayimamba.
Yingakho-ke sibonga kulo mndeni ngokwamukela nokuhlonipha njalo ubudlelwano obebumi ngobuqotho phakathi komholi wethu nalomndeni. Sidlulisa isandla sokubuyisana egameni lomzabalazo wenkululeko yezwe lethu naphakathi komphakathi waseSisonke ngokuhlonipha lomndeni ngezikhathi zonke.
Sithokoza kakhulu-ke mengameli wethu esimhloniphayo ngokusihlonipha singamalunga esizwe esilapha kwaBhaca. Sesiyofisa umengameli aselekelele nasemitatsheni yolwazi asitholi zincwadi selekelele abantu bathole ulwazi olufanele ngale kwemfundisoze ngobuqotho bakho mengameli eizingqweleni ezifana noMnuz O.R. Tambo, nabanye.
Njengamadodana akhona esifundeni sethu sesibe nesikhalo ngokuthi uDkt W.Z.Chonco akakanikezwa ukuhlonishwa njengenye yezingqalabutho nawe mengameli wethu usekhona.
Ngokukhulu ukuzithoba mengameli siphakamisa ukuthokoza ngokusinikeza ukuhlonipheka ngosuku lokuvalelisa endodaneni kaDkt Chonco. Unwele olude Sondiya. Ngiyathokoza Andile Keswa Umkhulumeli weqembu ESISONKE